November 2021 – Barnyar Barnyar
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်၊ အကြွေး ပတ်လည်ဝိုင်း၊ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေသူများအတွက် ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်ကြည့်ပါ အကျိုးထူးပါသည် ဦးရွှေအိုးဘုရား 1998 ခုနှစ်မှာ မိသားစု စီးပွားရေး ကျခဲ့တယ်။ အကြွေးတွေတင်ခဲ့တယ်။အကြွေးတင်တာ က အ ကြောင်းမဟုတ် ။ တစ်လ တစ်လ ပေးနေရတဲ့အတိုးက မသေး…
Zawgyiျဖင့္ဖတ္ရန္ လာဒ္တိတ္ေနသူမ်ား ၊ ေဈးေရာင္းမေကာင္းသူမ်ား ၊ အေႂကြးမရသူမ်ား ၊ အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သူမ်ား ၊ ေငြေၾကး အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ား ၊အႀကီးအကဲနဲ႔ အဆင္မေျပသူမ်ား ၊ အလုပ္အကိုင္ တို႔လို တန္းလန္း ျဖစ္ေနသူမ်ား ၊ လာဒ္႐ႊင္ေငြဝင္လိုသူမ်ား အတြက္အလြန္တရာမွ လာဒ္႐ႊင္ေစေသာ ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၲီ႐ြတ္ေသာ ဂါထာကိုလက္ေဆာင္ေပးလိုက္ရပါတယ္…
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် အိမ်ကမယားကြီးကို ရိုးအီနေပြီး အပြင်က (ပိုက်ဆံသာရရင် ဘာမဆို လုပ်မယ်) ဆိုတဲ့ ပြီတီတီ ညို့တုတုလုပ်တတ်သူ (smallလေး)တွေကို စွဲလမ်းပြီးစိတ်ကူးယဉ် သာယာနေတတ်တဲ့ သင့်ကိုသင် ဟုတ်လှပြီအထင်နဲ့ပျော်မနေပါနဲ့။သင်စဉ်းစားကြည့်ပါ…သင်ခုလို မအောင်မြင်ခင်တုန်းက သင့်ကို အဖက်ဖက်ကနေ အစွမ်းကုန် စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားတက်သရော်ကူညီ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်သူဟာ ဘယ်သူလဲ? သင် ပင်ပင်ပမ်းပမ်း…
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် လိုအပ်သူများအတွက် မျှဝေခြင်းပါ။မိမိအိမ်ဘုရားတွင် မိမိမွေးနေ့တွင် လှူပါ။ အနီးဆုံး အခက်ခဲကိုကျော်ကာ လိုရာပြည့်နိင်၏။သင့်တော်ရာ ဖန်ခွက်ပေါ် ပန်းကန်၊ ပန်းကန်ပေါ် ကိတ်မုန့် တင်လှူပါ။ နေ့ခင်း (သို့မဟုတ်) ညနေ / ညဘက် စွန့်ပြီးစားသုံးနိင်ပါသည်။ တနင်္ဂၤနွေသားသမီးများ ဖန်ခွက်ထဲ အုန်းရည် (သို့ မဟုတ်) နွားနိ့ထည့်ပါ။…
ဇန်နဝါရီလ 19ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Leopauld Sanchez လို့ခေါ်တဲ့ တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်လေးဟာ ကားတိုက်မှုကရရှိခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကလေးငယ်လေးဟာ အသက်တစ်နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပြီး ကားတိုက်မှုကြောင့် ဆေးရုံတက်နေရတာ နှစ်လဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ Leopauld ရဲ့အခြေအနေဟာ ပြန်ကောင်းလာခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဦးနှောက်သေသွားခဲ့ပြီး သေဆုံးရမယ့် အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အခြေအနေအရောက်မှာတော့ ဒီကလေးလေး…
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ယောကျ်ားလေးတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မများ လမ်းမှာ သွားရင်း လာရင်း ကောင်မလေးတွေတွေ့လို့ ဟေ့ချစ်ချစ်လို့ ခေါ်ပြီး ပါးစပ်သရမ်းရင် ပုဒ်မ – ၅၀၉ ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်၊ ကားပေါ်မှာ မိန်းကလေးတွေကို မတော်မရော် သွားထိရင် ပုဒ်မ – ၃၅၄…
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ငွေသုံးသိန်းရှိတယ်…ဘာရင်းနှီးရင် ကောင်းမလဲ?(အရမ်းကောင်းတဲ့ Idea လေးပါ) သိပ်ကောင်းတဲ့ idea တစ်ခုကို မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ အရင်းဆုံ ကိစ္စမတင်ပြခင် ပြောပြသင့်တဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခု ရှိပါတယ် …။ စတိမ့်ဖော့်(Stanford) တက္ကသိုလ် ကကျောင်းဆရာမ ဖြစ်သူ တီနာ ဇီးလစ်(Tina seelig)…
Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ေကာင္ေလးတစ္ဦးဟာ ပင္လယ္ထဲကို ေရဆင္းကူရာမွ အပ္ငါး လို႔ေခၚတဲ့ ငါးတစ္ေကာင္က ေရထဲကေနခုန္ၿပီး အဆိုပါေကာင္ေလးရဲ႕ လည္ပင္းကို လွမ္းထိုးခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ အပ္ငါးရဲ႕ လွမ္းထိုးမႈေၾကာင့္ အပ္ငါး၏ ႏႈတ္သီးဟာ ေကာင္ေလးရဲ႕ လည္ပင္းဟာ ထုတ္ျခင္းေပါက္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အပ္ငါး ထိုးခံရသူ မိုဟာမက္…
Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ Namibia ႏိုင္ငံက Himba လူမ်ိဳးစုမွာ အလြန္ထူးဆန္းတဲ့ ဓေလ့တစ္ခုရွိပါတယ္။ သူတို႔ကို အနီးအနားဝန္းက်င္က ႐ြာေတြက Ovahimba လူမ်ိဳးလို႔သိၾကပါတယ္။ သူတို႔မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းသိမ္းလာခဲ့တဲ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြရွိၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေခတ္ေပၚ အယူအဆလႊမ္းမိုးမႈေတြကို လုံးဝလက္မခံၾကပါဘူးတဲ့။ သူတို႔လူမ်ိဳးစုရဲ႕ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြက ေခတ္နဲ႔မေလွ်ာ္ညီေတာ့ေပမယ့္ ဒီ…